James Swan;”Soomaaliya waxay xaq u leedahay in ay doorato hogaamiyeyaasheeda” | Allbalcad Online
Home WARARKA James Swan;”Soomaaliya waxay xaq u leedahay in ay doorato hogaamiyeyaasheeda”
Ergeyga gaarka ah ee Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay James Swan ayaa qudbad ka jeediyay maanta munaasabadda xuska maalinta Qaramada Midoobay. Qudbada kadib ayaa su’aalo la weydiiyay James Swan waxaa ka mid ahaa ciidamada Maraykanka ee la sheegay in laga saarayo dalka Soomaaliya,waxana uu ku jawaabay in su’aasha ay tahay in la weydiiyo dowlada Maraykanka.
Waxaan aaminsanahay in Soomaaliya xaq u leedahay in ay doorato hogaamiyeyaasheeda” ayuu ku jawaabay Mudane Swan. “Walow ay suurto gal noqon weysay doorasho qof iyo cod ah, haddana waxaan ku rejo weennahay in nidaamkan doorasho uu qabsoomo. Majiro qof raba in Soomaaliya ay gasho jahwareer siyaasadeed”
Previous articleWasaaradda Arrimaha Dibbada Ethiopia oo u yeertay Safiirka Maraykanka
Next articleErdogan: Muslimiinta ayuu ku khafiifay Macron ee maskaxdiisa hala Baaro